XOG: Khilaaf soo kala dhexgalay Guddiga Doorashooyinka Jubbaland, Maxaase keenay? - BAARGAAL.NET F
Home doorashada Jubbaland jubbaland xog hoose XOG: Khilaaf soo kala dhexgalay Guddiga Doorashooyinka Jubbaland, Maxaase keenay?
XOG: Khilaaf soo kala dhexgalay Guddiga Doorashooyinka Jubbaland, Maxaase keenay?
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland ayaa sheegaya in uu khilaaf soo kala dhexgalay xubnaha guddiga Doorashooyinka Madaxa banaan ee Jubbaland, ka dib markii ay isku qabteen liiska xubnaha baarlamaanka ee maamulkaas.
Gudoomiye kuxigeenka ayaa sameeyey ficilo uu ku cadeynayo in guddigu aysan isku raacsaneyn xataa warqad loo diray Beesha Caalamka, taas oo ujeedeedu ahayd in guddigan ay ku shaqeynayaan dastuurka iyo hab raaca Jubbaland
Warar hoose ayaa sheegaya in gudoomiye kuxigeenka guddigan uu heshiis hoose lahaa qaar kamid ah musharaxiinta balse uu arkay in aan waxba kasoo baxeyn mudanayaasha baarlamaan ee kooxahaasi ay wateen oo liisaska oo dhan ka baxay.
XOG: Khilaaf soo kala dhexgalay Guddiga Doorashooyinka Jubbaland, Maxaase keenay? Reviewed by Admin on August 12, 2019 Rating: 5
Tags : doorashada Jubbaland jubbaland xog hoose
doorashada Jubbaland|jubbaland|xog hoose|